ဘဝတစ်လျောက် စိတ်အေးချမ်းသာနည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Buddhism » ဘဝတစ်လျောက် စိတ်အေးချမ်းသာနည်း	4
Posted by True Answer on Dec 7, 2015 in Buddhism, News, Science & Religion |4comments
ဘဝတစ်လျောက် စိတ်အေးချမ်းသာနည်း (သို့) သဘာဝတရား (သို့) အရိယ သစ္စာတရား ကို မှန်ကန်စွာနားလည်စေရန် ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ နှင့် ခေတ် သစ် သိပ္ပံ ရှုထောင့်မှ ရှင်းလင်းတင်ပြထားသော စာအုပ် ဒုတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိ။
ဘဝတစ်လျောက်စိတ်အေးချမ်းသာနည်း လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု သင်တန်း စခန်းများလည်း စရိတ်ငြိမ်း ဓမ္မဒါန တက်ရောက်နိုင်ပါပြီ။
I want to share of right understanding which can give rise to real happiness & freedom as much as I can understand.
My sharing is based on the teaching of Buddha, Mogok Sayadaw Gyi, Ahin Ottamasara from ThaBarWa Meditation Centre, Thanlyin Township, Yangon, Myanmar.
ချမ်းသာအစစ်ကို ရရှိ သိရှိ နားလည်ရေး ...မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး တရားနည်း ( နှလုံးသွင်းမှန်မှု) ကို သိရှိရေး တင်ပြသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
View all posts by True Answer →	Blog
အီးမြောက်မြောက် says: နိုင်ငံရေးတွေ မြင်ရကြားရဖတ်ရဆိုရဆဲရ နေတာနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ အကုသိုတွေတယ်များသကိုးဗျာ
တရားစခန်းလေးဘာလေး စမ်းဝင်ကျိ ဦးမှပါပဲ
Mike says: .ဘဝတစ်လျောက် စိတ်အေးချမ်းသာနည်း စာအုပ်လေးဝယ်ယူအားပေးဖတ်ရှုပါအုံးမည်
Alinsett @ Maung Thura says: PDF နဲ့ ဘယ်မှာ ရနိုင်လဲထည
True Answer says: http://www.thabarwa.org/%e1%80%98%e1%81%80%e1%80%90%e1%80%85%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%ba%e1%80%ac%e1%80%80%e1%80%b9%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%90%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%b8%e1%80%81%e1%80%ba%e1%80%99/